संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन ! — Sanchar Kendra
संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन !
काठमाडौं । संसदले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख छ । एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणाबारे सांसदहरूले के भने ?
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एमसीसी सम्झौताका लागि जारी गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने र तत्काल चिठी पठाउनुपर्ने बताए।
सांसद कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै नेपालले दिर्घकालीन विकास रणनीतिको घोषणा बनाउनुपर्ने र विकासका लागि आफ्नो प्राथमिकता निश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सांसद पार्वतीकुमारी बिशंखेले अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरेको व्याख्यात्मक घोषणा हुबहु पारित गरेर अमेरिकाले पनि हुबहु कार्यान्वयनमा लानुपर्ने बताइन्। सो घोषणा कार्यान्वयन नभए यो सम्झौतामा नेपाल सहभागि नहुने उनको भनाई छ।
सांसद दुर्गा पौडेलले सो सम्झौता राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको खिलापमा रहेको बताइन्। एमसीसीलाई मतदानद्वारा खारेज गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले व्याख्यात्मक घोषणालाई भ्रमात्मक घोषणाको संज्ञा दिएका छन्। एकपक्षीय घोषणा गर्नु केवल नेपाली जनतालाई ठग्नु भएको उनले उल्लेख गरे। उनले यो दिनलाई नेपाली स्वाधिनताको लडाँइमा इतिहासको कलंकको रूपमा चित्रण गरे।
सांसद राजकिशोर यादव
सांसद राजकिशोर यादवले व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी बारेको भ्रम चिर्ने बताए। अमेरिकाले अनुदान दिएको भए पनि यसलाई दुई देशबीचको सन्धि सम्झौतासँग तुलना गरिएको भन्दै उनले यो केवल अनुदान रहेको बताए।
सांसद मीन विश्वकर्माले एमसीसीबारे भ्रमको बिस्कुन छरिएकोमा व्याख्यात्मक घोषणाले भ्रम निवारण हुने बताए। सो अनुदान सम्झौता पारित गरेर आगामी दिनमा ऋण घटाउने र अनुदान बढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद मातृकाप्रसाद यादवले सरकारले एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तुत गरेर जनताको आवाज सम्बोधन गरेको बताएका छन् ।
उक्त घोषणालाई सन्धिको अंग नमाने नेपालले पनि नमान्ने बताए। ‘जनताको आवाजको दस्ताबेज हो । दस्ताबेज सन्धिको अंग बन्नेछ । यदि अमेरिकाले मानेन भने स्वतः हामी पनि मान्दैनौँ ।’ जनताले आवाज उठाएपछि व्याख्यात्मक घोषणा भएको बताए । आ–आफ्नो गलत धारणाको आत्मालोचना गर्न सुझाव दिए।
नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको व्याख्यात्मक घोषणा नयाँ कुरा नभएको बताएका छन्। उनले व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौतामा भएकै कुरा रहेको बताए। उनले एमसीसी पास गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि मद्दत गरिरहेको भन्दै धन्यवाद दिए।
‘एमसीसी पास गर्नुपर्थ्यो। अब पास हुन्छ’ उनले भने, ‘यहाँ प्रतिपक्षी दलले नारा लगाइरहेको छ। तर, एमसीसीको विरोध गरेको छैन। त्यसकारण यसमा राष्ट्रिय सहमति बनेको छ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले एमसिसीमाथि सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर प्रस्ट पारिदिएको बताएकी छन्। आइतबार संसदको दोस्रो बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता भुसालले एमसिसीले नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने बताएकी छन् । ‘यसले नेपालमा रोजगारी वृद्धि गर्नेछ। सडक विस्तार हुनेछ। विद्युत बढाउन सहयोग पुग्नेछ। जसले गर्दा अर्थतन्त्र बलियो हुनेछ,’ उनले भनिन् ।
उनले एमसिसी दुईपक्षीय सम्झौता भएको र यसमा आर्थिक सुशासन तथा पारदर्शिता भएको बताएकी छन् । त्यसैले समयसीमाभित्रै यसको रकमलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उनले धारणा राखेकी छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट एमसिसी पारित नगर्न आग्रह गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै सांसद पोखरेलले भने ‘हामी इमान्दार छौँ भने यो सदनबाट आज पारित नगरौँ। व्यापक छलफल गरौँ त्यसको जगमा सरकारले नयाँ सिराबाट अमेरिकी सरकारसँग एमसिसीसँग छलफल गर्नुहोस् । सम्झौता अंग बनाउनुहोस् ।’
उदारो घोषणाबाट एमसिसी खारेज नहुने नहुने उनको भनाइ छ । उनले सम्झौता पारित हुने नेपालका मुद्दा सम्बोधन नुहने कच्चा काम नगर्न आग्र गरे ।